Kụrụ Ndị Na-akpọ Gị Ọkụ? Ikekwe Ọ bụ Yourhụnanya Ndị hụrụ Gị n'anya! | Martech Zone
Isi okwu mmechi Jay Baer bụ otu n'ime ihe kacha mma m hụrụ na Social Media Marketing World. Jay tụlere akwụkwọ ya na-abịanụ, Kụrụ Ndị Na-akpọ Gị Ọkụ. Ihe ngosi ya dị egwu ma na-akwa njakịrị ụfọdụ nyocha dị ịtụnanya Tom Webster ya na ndị otu ya na etu itinye ego iji dozie mkpesa na ngwa ngwa ga - eto eto azụmaahịa gị.
Ihe ngosi a na-agwa ụfọdụ ihe atụ dị egwu nke ụlọ ọrụ na-aza mkpesa na otu o si dị mma maka azụmaahịa.
Enwere m obi abụọ. N'ezie, afọ gara aga na Social Media Marketing World, emere m ihe ngosi ebe m weere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ụlọ ọrụ na mgbasa ozi ọha na eze ma gosipụta na ọ dịghị nke ọjọọ ndị ahụ nwere ogologo oge, mmetụta na-adịghị mma na ụlọ ọrụ ndị mere ha.
Na Facebook n'oge na-adịbeghị anya, Jay kesara ụfọdụ nyocha nke onwe nke ọrụ ụgbọ elu na echetara m ozugbo banyere mkparịta ụka a dị ịtụnanya n'etiti ndị ọchị ọchị Louis CK na Conan O'Brien.
Ọ bụ ezie na ọ na-eju m anya na teknụzụ dị ịtụnanya dị na mkpịsị aka ndị ahịa n'oge a, enwere m mmechuihu kwa ụbọchị na ntigbu nke ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na m na-ahụ n'ịntanetị.
Apple Kwesịrị Hmachi Ndị Kụrụ Ya?
Ezigbo ihe atụ m nwere ike ikwu na mbụ bụ Apple. Abụ m onye ọkpọ ọkụ nke Apple. Abụ m otu n'ime nut-ikpe nke setịpụrụ mkpu ya maka 3AM EST wee zụta ogbe mbụ nke Apple Watches. Enweghị m ike ichere inweta ya n'aka m.
Gụọ na ntanetị ma enwere ụda ụda nke techies, ndị na-ede blọgụ, na ndị Apple kpọrọ asị na-eche nche. Ha nọ ebe niile… ma ọ dịghị nke echiche ha metụtara m. Echeghị m na ihe ọ bụla n'echiche ha kwesịrị ịgbasa Apple. Oke oke ọnụ, enweghị ihe ọhụụ, ogo na nsogbu ọ bụla complaints mkpesa niile sitere n'aka ndị kpọrọ asị. Hey kpọrọ asị… otu nde e rere n'otu ụbọchị ma ugbu a na usoro iji laghachi June. Hat na-agaghị Apple Watch na agbanyeghị, gịnị mere ị ga-amakụ ha?
DK New Media Ọkụ Hat na hụrụ ndị hụrụ ya n’anya
N'afọ gara aga, mgbe anyị gbakechara n'afọ nke ọgba aghara tupu, anyị malitere mgbake anyị. Ọtụtụ n'ime nsogbu anyị kpatara m. Anyị gbasaa na-enweghị ihe ndị dị mkpa wee mechaa jupụta oghere ahụ. Kama ịrụsi ọrụ ike iji mata nri ahịa, anyị wee fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-arịọ maka enyemaka anyị… na ọ bụ a nro. Anyị emerụ elu ọbụna na-emebe ihe infographic banyere ụdị ndị ahịa anyị na-ere ọkụ.
Anyị nakweere ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa na-eme mkparị ma dị ọnụ ala. Ha eleghị anyị anya dị ka onye ibe, ha lere anyị anya dị ka ihe ịma aka ịpịcha penny ọ bụla. Anataghị m ndị kpọrọ anyị asị, anyị chụpụrụ ha.
Ugbu a, anyị na-etinye mgbalị pụrụ iche iji mee ka ndị ahịa anyị nwee ikike na ijide n'aka na anyị nwere ezigbo ọdịbendị na ibe anyị yana anyị kwenyere na anyị nwere ike ịga nke ọma isoro ha rụọ ọrụ. Ihe dị iche bụ abalị na ehihie. Anyị na-enwe afọ anyị kachasị mma, anyị na-agbasa nzọ ụkwụ anyị, anyị nwere obi ụtọ, na ọrụ anyị na-arụ dị mma karịa ka anyị dịbu.
Gbalị ime ihe na-amasị ndị kpọrọ anyị asị na-agwụ ike. Ya mere anyi anaghi anwa ozo. Ọ bụrụ na mmadụ agwa anyị okwu ọjọọ, anyị na-aza ya eziokwu mgbe niile - ma ọ bụ n’ihu ọha ma ọ bụ n’ihu ọha. Oge ụfọdụ anyị na-agbachi opi, mana imirikiti oge anyị na-aga ije. Anyị kwesịrị ilekwasị anya anyị na ndị ahịa nwere ekele maka anyị, ọ bụghị ndị na-agaghị ewe anyị n'ọrụ ma ọlị, kwado anyị, ma na-anọdụ ala na-ewere ite ite anyị.
Kụrụ ndị kpọrọ gị asị? Ime oke mgbalị. Ọ ga-akara m mma ịhụ ndị hụrụ m n’anya n’anya. Ha bụ ndị na-agbasa okwu, gbasaa njikọ ha na anyị, chọta anyị ndị ahịa karịa, ma nwee ekele maka ihe anyị mezuru ha.
Ndị mmeri ọ na-agba agba na-ada oyi?
Mgbe m lere anya n’ahịa, egwuregwu, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ onye ndu ọzọ na - aga n’ihu - Ọ na-afọ obere ka m na-ahụ ndị na-eleghara ndị kpọrọ ha asị anya wee wepụta ihe ịga nke ọma ha. Ndakpọ ahụ m hụworo bụ ndị gere onye ọ bụla ntị, nwaa ime ihe na-atọ onye ọ bụla ụtọ, na enweghị ike izute atụmanya na-agaghị ekwe omume nke ahịa ahụ setịpụrụ.
Mgbe m lere anya na ụlọ ọrụ ndị dị ka ekwentị mkpanaaka, eriri, ọrụ, ụgbọ elu na ndị ọzọ… M na-ahụ ndị ahịa na-achọ ihe karịrị uru ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha dị njikere ịkwụ ụgwọ. Ma ọ bụrụ na ha anaghị enweta ihe ha chọrọ, ha na-atụba ihe ga-eme ka ọhaneze hụ. Ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ gbalịrị ijere ha ozi nke ọma ma gbakwunye obere ego na ụgwọ ha, ndị na-azụ ahịa ga-agbapụta maka azịza ego ọzọ dị ala.
Echere m bụ na ọ bụrụ na ụgbọ elu ______ mesoro ndị ahịa ha ihe ka njọ, ha ka nwere ụgbọelu juru na ha na-aga ebe ọzọ ha juputara na ndị ahịa ndị jiri nyocha ịntanetị chọta ọnụahịa dị ala. Echeghị m na ọtụtụ ndị akpọm asị na-echedị maka ụlọ ọrụ ụgbọelu, ha ga-eme mkpesa n'agbanyeghị agbanyeghị. Imirikiti ụgbọ elu na-enwe ebe a na-edobe ebe ọ na-agaghị ekwe omume ịpụ na akara ha ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị lebara anya.
Chọrọ Lovehụnanya? Lezienụ ya!
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na m akwụ ụgwọ maka klaasị azụmaahịa, zụta ụgbọ ala okomoko, tinye ego na akwụkwọ ikike ma ọ bụ mkpuchi agbatị, ma ọ bụ mmiri maka laptọọpụ dị oke ọnụ, enweghị m ka m nwere nsogbu ndị ọzọ na-abanye. Ungelọ ezumike ndị njem Delta - dịka ọmụmaatụ - bụ AMAZING ma ị nwere ike ịzụta nnweta n'ọtụtụ njem maka obere mgbakwunye. Mgbe onye ọ bụla na-echere onye na-ahụ maka tiketi ahụ, m jidere ihe ọ andụ drinkụ na onye nnọchi anya Delta wepụrụ aha m ma gbanwee n'ime ihe na-eme m n'ụzọ. No nsogbu, mba muss… M abua nwere ekele maka ya na m kwụrụ ụgwọ maka ya.
Na-akwụ ụma, a na m enweta ọrụ magburu onwe ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge echere ọ bụla, yana azịza ozugbo. Ọ bụrụ na m ga-achọ ihe kacha mma, m kwesịrị ịdị njikere ịkwụ ụgwọ maka ya. Ọ bụrụ na enweghị m ike ị nweta ego kacha mma, aga m enwe afọ ojuju n'ihe fọdụrụ.
Ekwela ka m mehie. Aga m agbasi mbọ ike iji tụgharịa onye ahịa na-enweghị obi ụtọ. Enwere m ụgwọ dịkarịrị ala n'ihi na ha tinyere anyị ego. Ma ọ bụrụ na ha dị nhụjuanya ma ọ bụ na-emegbu m ma ọ bụ ndị ọrụ anyị, a nweghi onye nwetara oge maka dat! Echere m na enwere ọnụọgụ dị ịrịba ama nke ndị kpọrọ asị n'ịntanetị nke ụlọ ọrụ kwesịrị ịgwa bugger.
Jay… ewepụla ọrụ gị.
Tags: nyocha edisonkpọọ ndị kpọrọ gị asị asịJay Baerhụ ndị hụrụ gị n’anya n’anyamkpesa onlineNyocha banyere ntanetịmmetụtaTom webster
Akwa post Doug, daalụ.
Di na nwunye. Anaghị m ekwu okwu banyere nnukwu blunders na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi na-akpata ọgba aghara. Enweghị otu ihe atụ na isi mmalite dị ka nke ahụ, ọ nweghịkwa ihe atụ n'ime akwụkwọ ahụ ga-adị, ma. Ihe m na-ekwu bụ okwu ọjọọ kwa ụbọchị, mkpesa, 1 na 2-kpakpando nyocha na ụlọ ọrụ ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nha na ụdị na-aza ekwekọghị, ma ọ bụrụ na ọ bụla.
Ọ na-ewe ọtụtụ ọrụ iji zaghachi mkpesa ọ bụla, oge ọ bụla, na ọwa ọ bụla? N'ezie. Mana nyocha anyị mere gosiri na mmụba nke ịkwado ndị ahịa mgbe ị zara mkpesa na-adị mkpa, yana mbelata nke ịkwado ndị ahịa mgbe ị na-eleghara negativity dịkarịrị ukwuu.
Companieslọ ọrụ ụfọdụ enwere ike ileghara okwu na mkpesa na-adịghị mma anya? Eeh. Mana ụlọ ọrụ ndị ahụ abụghị ndị nkịtị.
Achọrọ m ime ka o doo anya na ndugharị gị Haters prescription B NOTGH that na ndị ahịa na-ezi ezi mgbe niile. Ọ bụghị eziokwu, ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iji ụzọ gị si azụ ahịa gị. Ihe ndenye ọgwụ bụ kama na a na-anụ onye ahịa mgbe niile. Nnukwu ihe dị iche. N'ezie, ebe m na-abanyeghị n'okwu ọnụ, okwu m bụ ka ị ghara ịza ihe karịrị ugboro abụọ n'otu eri / mkpesa / blog, wdg.
Ihe ọzọ dị mkpa ịmara bụ ihe dị iche na ndị na-eme ihe nkiri na-eme mkpesa na nzuzo, na ndị na-akpọ Onstage Haters na-eme mkpesa n'ihu ọha. Isi ihe bụ ịghọta na onye nke mbụ chọrọ azịza, nke ikpeazụ ahụ chọrọ ndị na-ege ntị. Ihe na-adịghị mma bụ egwuregwu ndị nkiri ugbu a, ọ bụ ezie na ị nwere ike (n'ụzọ ziri ezi) ịchọrọ ịgwa onye ahịa iwe (ma ọ bụ iwe) ka F-Gbanyụọ na eziokwu bụ na karịsịa na Onstage Haters, ezigbo ihe ize ndụ abụghị na onye ahịa ahụ efuo, kama ọ bụ n'ihe ndị na-ekiri ihe na-eche banyere ụlọ ọrụ gị na ụkpụrụ gị.
Jay - daalụ nke ukwuu maka iwepụta oge iji dokwuo anya. Enweela m iwu ọtụtụ akwụkwọ maka ndị ọrụ anyị n'ihi na ozi a ga-adị oke egwu maka ndị ahịa anyị.
M na-eche banyere ya na ndị dị mfe echiche na “ndị ahịa abụghị mgbe niile ziri ezi,… ma ha bụ ndị ahịa”. Yabụ, nke ahụ na - eme ka m kwụsịlata ma zaghachi n'ụzọ dabara adaba - na - achọ ịghọta ihe kpatara ezigbo nsogbu bụ na ihe nwere ike ịbụ nzaghachi na azịza ezi uche dị na ya. Nke ahụ eduzila mgbalị m 'ịmakụ onye kpọrọ asị.'
Aghọghị m onye ofufe, Curt. Echere m na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ndị nzuzu na omume ọjọọ ha ekwesịghị ịnabata. Mfe karịa ime karịa mgbe ị nwere azụmahịa m chere!